China SD6N Bulldozer Emeputa na Supplier | Xuanhua
SD6N katapila bụ 160 horsepower track-ụdị dozer na haịdrọlik kpọmkwem draịva, ọkara-isiike kwụsịtụrụ na haịdrọlik njikwa. Ejiri ya na Shangchai C6121 diesel engine nke arụpụtara n'okpuru ikikere Caterpillar. The engine nwere àgwà nke nnukwu torque idobere ọnụọgụ ...
SD6N katapila bụ 160 horsepower track-ụdị dozer na haịdrọlik kpọmkwem draịva, ọkara isiike kwụsịtụrụ na haịdrọlik njikwa. A kwadebere ya na Shangchai C6121 diesel engine nke arụpụtara n'okpuru akwụkwọ ikike Caterpillar. The engine nwere njirimara nke nnukwu torque idobere ọnụọgụ na ikike megide n'elu-ibu. The torque Ntụgharị bụ hydro-n'ibu ihe Ntụgharị onye ike ya na-ekewa n'èzí, nke nwere àgwà nke obosara elu arụmọrụ nso. Enwere ike ijikwa otu lever ahụ jikwaa ya na braku ya. Braking usoro utilizes haịdrọlik boosting Ọdịdị, nke bụ adaba na oru-azọpụta. Ikpeazụ mbanye gia nwere e ji mara nke nnukwu Ndahie ọnụọgụ uru. Kinddị ụdị a na-ebuli ikike na-abawanye ma na-agbatị oge ahụ bara uru. Oge ikpeazu a na-ejikwa ihe owuwu ahụ eme na enweghị nhichapụ ya, nke dị mfe maka ọrụ. Ogwe nhazi ụda na-eji usoro lubricating n'efu iji belata ọnụahịa ọrụ.
Nsogbu ala (gụnyere ripper) (KPa): 55.23
Nkeji nkwụsị ala (mm): 445
Obosara (mm): 3279
Max. Igwu ala omimi (mm): 592
N'ozuzu ya (mm): 503732973077
Ike Flywheel (KW / HP): 119/162
Ugboro oriri oriri (g / KWh): 215
Number nke track rollers (n'akụkụ ọ bụla): 2
Gaanụ ihu (Km / h) 0-4.0 0-6.9 0-10.9
Azụ (Km / h) 0-4.8 0-8.4 0-12.9
Mmepụta sistemụ L / min: 178
Torque Ntụgharị: N'èzí nkewa Nchikota
Final mbanye: The ikpeazụ mbanye na-okpukpu abụọ Mbelata na spur gia na nke sprocket.
Nke gara aga: TY160-3 Bulldozer
Osote: TS160-3HW Bulldozer